कोरोना संक्रमणले पुरुषहरु नपुंसक बन्ने सम्भावना । अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो ! (रिपोर्टसहित) - Nagarik Bahas
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३१, २०७७ समय: ९:०९:३३
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सबै उमेर समूहका व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । अहिलेको भन्दा पनि भावि पुस्ताको चिन्तासमेत संक्रमणपछि व्यक्त हुन थालेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पुरुषको सेक्स हर्मोनमा ठूलो असर गरेको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
कोरोना संक्रमणपछि पुरुषहरु नपुंसक बनिरहेका छन् । संक्रमणले पुरुषको अण्डकोषमा समस्या हुने गरेको छ । उत्तेजनामा पनि कमी आएको पाइएको छ ।
चीनको वुहानस्थित वुहान युनिभर्सिटीको झाङ्गनान अस्पतालको एक रिपोर्ट अनुसार कोरोना संक्रमण ठिक भएका ८१ पुरुषमा गरिएको गहन अध्ययनमा पनि यौन क्षमता घटेको पाइएको छ । यसअघि प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न गरिएका २० देखि ५४ वर्षसम्मका ८१ जना पुरुषमा हुबेइ क्लिनिकल रिसर्च सेन्टर फर प्रिनेटर गायग्गोसिस एण्ड बर्थ हेल्थका वैज्ञानिकले गहन अध्ययन गरेका थिए । यी सबैजनाको सेक्स हर्मोनको जाँच गरिएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न चिकित्सक तथा वैज्ञानिकका अनुसार यी बिरामीमा टेस्टोस्टेरोन र ल्युटिनाइसिङ्ग हर्मोनको T/LH अनुपात बिग्रिएको पाइएको छ । यसलाई भनिन्छ । यदि T/LH को अनुपात बिग्रिएमा पुरुषको अण्डकोषले राम्रोसँग काम गर्दैन । वीर्य पनि कम उत्पादन हुने र सेक्स हर्मोनमा पनि कमी आउँछ ।
जुन पुरुषको अध्ययनमा संलग्न गरिएको थियो, उनीहरुमा T/LH अनुपात ० दशमलब ४ मात्र थियो । यो सामान्य अवस्था भन्दा निक्कै कम हो । यसले भावि पुस्तालाईसमेत चिन्तित बनाएको छ ।
टेस्टोस्टेरोन हर्मोन पुरुषका लागि महत्वपूर्ण हर्मोन हो । यसले अण्डकोष, मांसपेशी, हड्डी र कपाललाई सामान्य अवस्थामा राख्न सहयोग गर्छ । ल्युटिनाइसिङ्ग हर्मोन महिला र पुरुष दुवैमा हुन्छ । यसले उत्तेजना ल्याउन सहयोग गर्छ ।
वैज्ञानिकहरुले कोरोना भाइरसका कारण पुरुषमा उत्तेजना समाप्त भएको पाइएको जनाएका छन् । यसलाई इरेक्टाइल डिसफङ्सन भनिन्छ । संक्रमणले प्रष्टरुपमा पुरुषमा यौन क्षमतामा गम्भीर असर गरेको पाइएको छ ।
वुहानको टोङ्गजी अस्पतालको रिप्रोडक्टिभ मेििसन विभागका प्रोफेसर डा. लि युफेङ्गले आफूले पहिले पनि यो विषयमा अध्ययन गरेको बताए । कोरोनाले पुरुषको अण्डकोष र यौन क्षमतामा ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
चिनियाँ वैज्ञानिक तथा चिकित्सकहरुले छिट्टै यो विषयको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।